Afaka mampianatra ahy ve aho hoe ahoana no manampy ny backlinks araka izay azo atao?
Raha ny tena izy, ny dingana amin'ny famoronana rohy hafa ho an'ny tranonkalanao na ny bilaogy dia tsy sarotra tahaka ny mety eritreretinao. Ny fampidirana azy amin'ny teny anglisy, ny fananganana rohy ao amin'ny SEO dia mijoro amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena. Amin'ny teny tsotra dia midika hoe miverin-dalana eo amin'ny pejy misy anao ary manome azy ho valiny. Raha ny marina, ny fampiharana amin'ny paikady fananganana kalitao dia mety ny fomba faran'izay tsara indrindra hanatsarana ny paikady ankapobeny ao amin'ny sehatra SEO. Saingy alohan'ny hanehoana anao ny fomba hamerenana ny rindran-damina - tsotra sy mamaivay - avelao aho hanome anao teny fampitandremana. Ataovy ao an-tsaina fa ireto toro-hevitra momba ny fanorenana rohy ireto dia 100% azo antoka amin'ny fotoana. Saingy tsy misy antoka fa ny zavatra izay mahafaly antsika amin'izao fotoana izao dia hitoetra ho mitovy amin'ny rahampitso. Noho izany, etsy ambany ny dingana azo ampiharina amin'izao fotoana izao. Manantena aho fa hanampy anao hahatakatra ny fomba hanampiana backlinks amin'ny tranokalanao na blôginao - tsy misy fandaniam-bola be loatra, mandoa ny fotoanao sy ny ezaka.
Tsy misy zavatra mahagaga momba ny tombontsoa azo raisina ho toy ny backlinks sarobidy mamorona lahatsoratra blôgy noforonina. Ny zavatra rehetra ilainao eto dia ny manoratra betsaka ary manao izany matetika. Ataovy azo antoka fa hahamarika ny fanatrehanao ny fitaovam-pikarohana lehibe - Aza adino ny manolotra vaovao farany amin'ny blôginao. Manolo-tena manokana aho hividy ny kalitao, fa tsy ny habetsahana. Midika izany fa ny lahatsoratra fanoratana lahatsoratra roa na telo dia ny tokony hatao mba hanampiana ireo rindran-kira fanampiny hanompoanao ny fivoaranao. Ary tsarovy - misy fotoana mahafinaritra afaka hampiasa ny teny fototra tianao ho an'ny bilaogy tsirairay. Ary mazava ho azy, aza manandrana manadino ny teny fanalahidy, raha tsy tianao ny asa soratranao tahaka ny spam. Ataovy toy izao ny fametrahana fampiasam-bola mandritra ny fotoana fohy amin'ny fananganana rohy amin'ny alàlan'ny famahanam-bilaogy, fanoratana hevitra momba ny vokatra ary fanehoan-kevitra manintona, farafaharatsiny amin'ireo loharanom-baovao fahatelo amin'ny sehatry ny orinasa na fifanakalozan-kevitra.
Fanadihadiana momba ny teny sy ny fikarohana
Tsy ilaina ny milaza fa ny fikarohana ny teny fikarohana fototra mety angamba no toerana voalohany hanombohana ny fampivoarana ny sehatra SEO. Raha ny momba ny fananganana rohy manokana indrindra, tokony ho fantatrao ny fomba hanampiana backlinks amin'ny lahatsoratra farany ambony. Mba hahazoana ny zava-drehetra, dia aza misalasala mampiasa ny Google AdWords na fitaovana hafa mba handinihana ny fanadihadihana manontolo amin'ny fitenenana indray - amin'ity fotoana ity ho an'ny fikirakirana tranonkala mifandraika. Raha ny marina, raha ny famolavolana endri-tsoratra matanjaka indrindra, ny semantika dia manan-danja. Ohatra, ny teny iraisana mahazatra toy ny "vidin'ny marketing ara-tsosialy" dia mety ho toy ny semantika mitovy. Na dia izany aza, ny varavarana dia misokatra foana amin'ny fampitomboana ny fifamoivoizanao - manova ny teny tokana, na mametraka ny tsara indrindra.
Architectural tranokala mafonja sy fifandimbiasana
Alefaso mandrakariva ny rohy anatiny manondro ny lalana amin'ny fizarana tsirairay ao amin'ny tranokalanao na ny blôgy. Azonao atao ny mametraka rohy amin'ireo pejy tena be mpitsidika indrindra, ary mametraka fifandraisana mety amin'ny pejy fandraisam-peo na ny pejy fanananao. Mazava ho azy, tsy misy ifandraisany amin'ny karoka rohy ao amin'ny fikarohana Google, farafaharatsiny mivantana. Na dia izany aza dia mbola fotoana tsara indrindra tsy vitan'ny fananganana rohy manokana fotsiny, fa ny fandraisana anjara amin'ny tranokala maherin'ny tranokala. Na izany na tsy izany, ny fanapariahana ny tranokalanao na ny blôginao ho amin'ny toerana azo itokisana sy ahafahana mampiasa azy dia mety ho fanapahan-kevitra tsara. Na izany na tsy izany, afaka mahazo tombony amin'ny toerana ambony kokoa ianao, omena anao amin'ny loka maharitra - fa noho ny tranokala ara-tsakafo anao dia azo ampiasaina ary milaza fa ho an'ny mpampiasa rehetra izay mivoaka any Source .